Jwxo-shiil, oo Ergo u Dirsaday Addis Ababa, Ina-dhuubana Abaabul Dagaal Ugu Diray Gudaha Ogadeeniya. – Rasaasa News
May 18, 2010 Ina-dhuubana Abaabul Dagaal Ugu Diray Gudaha Ogadeeniya., Jwxo-shiil, oo Ergo u Dirsaday Addis Ababa
Warar xaqiiq ah oo naga soo gaadhay Godey ayaa sheegaya in todobaadkii hore bilowgiisii uu Ina-dhuubo ka soo galay dhinaca gabalka Doolo, gaar ahaana degaanka Buuhoodle, uuna haatan gaadhay degaanada Nogob yareey ee uu ku bar baaray.
Sida ay wararku sheegayaan waxaa la socda dad yar oo ay isaga xigto yihiin iyo tiro oo reerka Jwxo-shiil ah, madaama ay jirto halis badan ayuu iska ilaaliyey in ay muuqdaan. Sida ay wararku sheegayaan waxay kaxaysanayaan xoogaa halo oo ay ka soo gateen caro dhulbahante kuwaas oo ay ku raad gadanayaan.
Ina-dhuubo iyo raga la socda ayaa aad isaga ilaalinaya Somali galbeed iyo waliba dadka ka soo jeeda degaanka qoraxeey. Sababtuna waxaa weeye Ina-dhuubo oo ah ninka sadexaad afarta nin ee loo haysto in ay ka dambeeyeen dilkii Dr M S Dolal.
Ina-dhuubo, ayaa ay soo abaabushay Eritrea, madaama uu ka da,a yar yahay saddexda saa,il ee kale uuna yahay in dhulkaas xoolo ku raaci jiray oo geed geed u kala yaqaan.
Dhinaca, kale Jwxo-shiil, ayaa dirsaday Ergooyin huwan magac Jaaliyadeed oo aan jirin, balse wada fariimo u kala dabqaad ah Jwxo-shiil iyo dawlada Itobiya. Dadkaas waxay xiligan joogaan Jijiga waxayna sheegteen in ay ka socdaan Jaaliyaad taageersan Ismaamulka Somalida Ogadeeniya.
Ismaamulka Somalida Ogadeeniya, ayaa ku wareersan oo kala hori la,a dad badan oo insaarax wareer ah, oo sheeganaya ururo ayna ka tirsanayn iyo Jaaliyaad aan jirin, balse kuligood ah hunguri doon.
Waxayna aad ula yaaban yihiin masuuliyiinta Ismaamulka Somalida Ogadeeniya, dadkan oo ay badankood u arkaan in ay qabaan cudurada buufiska madaama ay in badan joogeen dalal dibad ah ayna ka dhaceen nolosha lagaga nool yahay reer galbeedka.
Waxaase dhab ah in ay jiraan dad badan oo u socda ujeedo hoosaasin ah iyo sidii ay uga faa,iidayn lahaayeen kooxda Jwxo-shiil, oo aan iyadu wanaag dan ka lahay ee wadata uun ganacsi qarsoon.
Jaango iyo Jwxo-shiil, Jalwaa Jarmal Aadayoo, Jiif Isbitaalbaa Jiroo Jeebabkiinay Baadhayaan, Iska Jira!